CNaPS tao Vavatenina
Ny fiahiana sosialy dia antoky ny fampandrosoana
Fantatra fa tena mbola vitsy ireo mpiasa eto Madagasikara ka misitraka ny fiahiana sosialy. Tombanana ho 12%n’ny mpiasa monja no misitraka izany. Mila fanarenana izany. Mandray anjara mavitrika amin’ny fanarenana izany ny CNaPS amin’ny alalan’ny hetsika maro endrika. Ohatra iray ny tany Vavatenina. Araho.